आज साउनको अन्तिम सोमबार, काेराेना कहरबीच पनि शिवालयलमा भक्तजन ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
आज साउनको अन्तिम सोमबार, काेराेना कहरबीच पनि शिवालयलमा भक्तजन !
Published : 10 August, 2020 2:29 pm
आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार भगवान शिवको पूजा आराधना गरि मनाइँदै छ । हिन्दू नेपाली नारीहरुले भगवान शिवको पूजा आराधना गरी सोमबारे व्रत समापन गर्छन् । साउन महिनाको हरेक सोमबार ब्रत बसेर शिवको पूजा गर्दै आएका महिलाहरुले आज विधिपूर्वक पूजाआजा गरी व्रत समाप्त गर्दछन् ।